Ahoana ny fomba ahazoana Adobe aorian'ny effets maimaim-poana - Ampidino Adobe maimaim-poana aorian'ny effets
Photo Retouching Services > Retouching Blog > Malagasy Blog > Ahoana ny fomba ahazoana Adobe After Effects maimaim-poana [Version Malagasy]
Ahoana ny fomba ahazoana Adobe After Effects maimaim-poana
By Ann Young, Mathis Ravatomanga 2022-01-02, Malagasy Blog
AFTER EFFECTS MAIMAIM-POANA
Te hampiasa Adobe After Effects maimaimpoana nefa tsy mandoa famandrihana $ 21 volana? Andao hojerentsika ny fomba ahazoana maimaimpoana ny Adobe After Effects ary hanombohana ny fitsapana an'ity rindrambaiko hita maso sy rindrambaiko mihetsika ity dieny izao. Ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao momba ny loza miafina amin'ny kinova triatra / torrent, avereno jerena ny safidy Adobe After Effects maimaim-poana tsara ary ampidino ireo LUT fanovana video maimaimpoana.
Na firy na firy ny Adobe After Effects torrent fisehoanao dia tsy azo atao ny misintona maimaimpoana sy tsy misy famandrihana. Ity programa ity dia matihanina ary miankina amin'ny tanjona ara-barotra. Ny fomba tokana ahafahanao manandrana sy mizaha ity rindrambaiko hita maso sy rindrambaiko mihetsika ity dia ny fampidinana ny Adobe After Effects Trial.
MAIMAIMPOANA After Effects mahasoa
Tranomboky lehibe misy plugins azo sintonina
Fanodinana feo sy horonantsary mandroso
Ohatrinona ny vidin'ny kinova After Effects?
Aorian'ny effet dia tsy misy amin'ny famandrihana fotsiny. Ny vidin'ny Adobe After Effects dia $ 20,99 isam-bolana. Ho fanampin'ity programa ity, ny famandrihana dia misy tahiry rahona 100GB, Adobe Portfolio, Adobe Fonts, ary Adobe Spark miaraka amina endri-javatra premium.
Ny drafitra famandrihana faharoa dia ny Adobe Cloud All Apps amin'ny $ 52,99 / volana. Ahitana fitambaranà birao famoronana 20+ sy fampiharana finday ao anatin'izany ny Photoshop, Illustrator, Adobe Premiere Pro ary After Effects, ary koa ny tahiry rahona 100GB, Adobe Portfolio, Adobe Fonts, ary Premium Spark miaraka amina endri-javatra premium.
Inona no hitranga aorian'ny faran'ny fotoam-pitsarana?
Rehefa tapitra ny fe-potoana fitsapana maimaim-poana an'ny Adobe After Effects dia hijanona tsy mandeha fotsiny ilay programa ary hitaky anao hisoratra anarana. Tsy hanafatra irery ny vola i Adobe satria tsy nampidirinao ny angona karatra.
JEREO AFTER EFFECTS VOKARIN'NY TOE-JAVATRA FITSAPANA MAIMAIMPOANA
Ny After After effects dia nohavaozina ny kinova Adobe Premiere Pro?
Matetika aho no nandre izany hevitra diso izany. Tsy mahagaga izany satria ny programa roa dia noforonina hiara-miasa amin'ny famokarana horonantsary. Ankoatr'izay, ny endrik'izy ireo dia tena mitovy, ary koa ny fiasa sasany. Saingy, Premiere Pro dia noforonina ho an'ny fanovana horonantsary ary manana fiasa mety be amin'izany. Mandritra izany fotoana izany, After Effects dia mety amin'ny sary mihetsika, ny effets visuels sns. Ny safidy tsara indrindra dia ny fampiasana miaraka ireo programa ireo.
Fa maninona no tsara kokoa ny mampiasa kinova manana fahazoan-dàlana noho ny an'ny Piraty?
Efa nianatra ny fomba ahazoana maimaim-poana ny Adobe After Effects ianao ary andao hiresaka izao ny antony maha-zava-dehibe ny fananana kinova ara-dalàna. Tsy mahagaga raha miaraka amin'ny vidiny sy ny fahaiza-manao toy izany, na ho ela na ho haingana, ireo mpijirika dia handefa ny kinovan'ny rindrambaiko. Saingy, maninona ny mpampiasa maro no misafidy ny misafidy fahazoan-dàlana sy mandoa isam-bolana toy izay misintona Adobe After Effects maimaimpoana atolotra amin'ny fomba tsy ara-dalàna?
Azonao atao ny miantehitra amin'ny fanohanan'ny matihanina avy amin'ny ekipa teknika Adobe amin'ny fotoana rehetra amin'ny andro.
Fiarovana hackers sy virus
Rehefa misintona rindrambaiko avy amin'ny tranokala ofisialy ianao dia mahazo vokatra madio sy voaporofo 100%. Mety ho azonao antoka tanteraka fa tsy misy viriosy mety hanimba ny rafitry ny solosainao. Ho an'ireo mpampiasa izay nisafidy ny fampidinana Adobe After Effects tsy ara-dalàna, dia mitombo imbetsaka ny fandrahonana ho lasa iharan'ny viriosy.
Saika 100% amin'ireo dika mitovy piraty amin'ny programa dia misy fanovana ny kaody programa voalohany. Mametaka ny fametahana Adobe After Effects tsy misy fahazoan-dàlana, tsy fantatrao mihitsy hoe iza ary inona no antony najifaina ary inona no fanovana azo atao amin'ny kaody programa. Ny karazana malware isan-karazany (ohatra, virus, trojan) dia azo ampidirina ao anaty programa piraty, ho toy ny bypass an'ny activation.
Tsy tokony hatahotra ianao satria miadana ny solosainanao satria matetika no mitranga izany rehefa mampiasa kopia piraty. Tsy mampiadana ny solosainanao ny rindrambaiko manana fahazoan-dàlana. Miara-miasa amin'ny fampiharana After Effects piraty ianao dia very fotoana. Ny hafainganam-pandehan'ny kinova piraty dia mihena matetika noho ny antony maro. Matetika, ireo programa isan-karazany napetraka amin'ny tambajotra dia manana rindrambaiko natsangana. Mety tsy dia ilaina loatra ho an'ny mpampiasa izany fa apetraka tsy misy ny fifanarahana nifanaovany. Vokatr'izany dia mampiasa loharanom-pahalalana mampiadana ny asany izy io.
Azo inoana fa ho very ny angon-drakitrao raha tsy mahomby ilay programa. Amin'ny alàlan'ny fahazoan-dàlana dia afaka miasa bebe kokoa ianao nefa tsy misy fanahiana. Ny kinova piraty amin'ny programa dia mety ho faty eo afovoan'ny asa. Indraindray dia afaka mamorona lesoka izay ho sarotra aminao ny miatrika azy satria tsy misy ny fanohanana ara-teknika. Raha zava-dehibe aminao ny fitoniana sy ny fahamendrehana dia aza adika ara-dalàna fotsiny ilay rindrambaiko.
UPDATE ADOBE AFTER EFFECTS MAIMAIM-POANA
Tsy misy atahorana
Ny fampiasana fampidinana Adobe After Effects tsy ara-dalàna dia fanitsakitsahana ny zon'ny mpamorona. Vokatr'izany, ny mpampiasa dia mety iharan'ny heloka bevava, fitantanan-draharaha ary sivily, indrindra raha mikasika ireo fikambanana mampiasa rindrambaiko toy izany amin'ny solosaina maro. Matetika ny fanaraha-maso ny fampiharana lalàna dia mifandraika amin'ny fisamborana solosaina. Mahatonga fiatoana na fahasarotana amin'ny asa izany. Ny asan'ny fikambanana dia mety ho malemy ary ny adidy amin'ny mpanjifa sy ny mpiara-miasa dia tsy tanterahina. Izy io dia misy akony lehibe eo amin'ny lazan'ilay orinasa. Miaraka amin'ny programa piraty dia afaka miatrika fatiantoka lehibe ianao.
4 After Effects maimaim-poana
Raha mila zavatra mihoatra ny fanovana horonantsary ianao fa tsy te handoa rindrambaiko After Effects, dia ny fampiasana safidy hafa maimaimpoana amin'ity programa ity no safidy tsara indrindra.
Hijery misimisy kokoa ary safidio ny rindrambaiko fanovana horonantsary tsara indrindra izany dia mety amin'ny tanjonao.
Atombohy ny famokarana horonantsary toy ny fanaon'ny matihanina.
Natron dia mpamoaka horonantsary loharano misokatra. Miaraka amin'ny traikefa kely dia kely, ny mpampiasa dia afaka manova ny sary an-tsary amin'ny sehatra somary matihanina. Ity fampiharana ity dia mety ho Adobe After Effects hisafidianana raha misafidy fitaovana matotra amin'ny famoronana vokatra manokana amin'ny horonan-tsary. Natron dia mamela anao hiasa amina karazana rakitra sy endrika maro. Raha mila izany ianao, ny fiasan'ity mpamoaka horonantsary ity dia afaka hitarina mora foana miaraka amin'ireo plug-in Open FX. Na dia tokony ho ampy hanatanterahana asa maro aza ny fari-pitsipika mahazatra. Anisan'ireo tombony sy fotoana mety hafa, mamela anao hiasa amin'ny horonan-tsary avo lenta, 2K sy 4K ny programa.
Mampiasà BLACKMAGICDESIGN MAIMAIMPOANA
Blackmagic Fusion (fantatra taloha amin'ny anarana hoe Fusion sy eyeon Fusion) dia programa fandaminana sary namboarin'i Blackmagic Design. Raha tsy mety aminao ny After Effects dia afaka mifandimby tsara ity programa ity. Ny studio Hollywood dia namorona blockbuster mahery an'arivony mahery tamin'ny alàlan'ity rindrambaiko ity nandritra ny 30 taona mahery taorian'ny nivoahany.
Ny fampiharana dia mampiasa fitaovana mahery vaika miaraka amina interface-friendly. Ho fanampin'izany, manome fanohanana ny habaka telo-habe sy ny zava-misy virtoaly izy io, ny mety hisian'ny tambajotram-pifandraisana amin'ny solosaina isan-karazany sy ny fanafainganana ny fikirakirana sary. Ao amin'ny Fusion, ny fanodinana sary aorian'ny fampiasana ny rafitra node. Io dia ahafahanao manao famoronana, fametahana sary, sary ary sary mihetsika amin'ny toerana 3D tena izy, ary koa manova ny hafainganam-pandehan'ny playback, mametraka ny fanaraha-maso sy ny fanamafisana ny sary.
Mampiasà FILMORA PRO MAIMAIMPOANA
Raha toa ianao ka tsy manao afa-tsy ny dingana voalohany amin'ny famokarana horonantsary na toa sarotra loatra ho anao ny After effects, dia andramo ny FilmoraPro. Ity programa ity dia misy fikirakirana vokatra maherin'ny 50. Misaotra azy ireo, mahazo fotoana be dia be ianao hanatsara ny horonan-tsarinao misy vokany manokana. Azonao atao ny manova ny maranitra, manampy flare, manodina ny horonantsary 360 degre, sns.
Ny programa dia mamela anao hamorona lohateny mihetsika avy amin'ny preset anatiny. Raha mila manampy vokatra voajanahary bebe kokoa ianao, dia ho eo am-pelatananao ny fanaingoana, ny fanadiovana matte ary ny lalan-kaleha. Marihiko ihany koa fa ity Adobe After Effects ity dia manohana ny fampifanarahana mandeha ho azy ny audio sy ny tsipika video tsy misy fetra. Raha maniry ianao dia afaka mampihatra vignette. Ity rindrambaiko maimaimpoana ity dia mora be miasa. Aza mandany ny fotoananao ary manomboka manandrana ny fiasany ary manatsara ny horonan-tsarinao misy vokany matihanina.
Mampiasà BLENDER MAIMAIMPOANA
Ity dia safidy tsara hafa amin'ny fampiharana After Effects. Maimaimpoana tanteraka ity rindrambaiko loharano misokatra ity ary mahazaka asa fanovana horonantsary maro. Fanampin'ny effets visuels, ny famoronana rindranasa 3D mifandraika sy sary mihetsika, ny famolavolana lalao video dia anisan'ny mampiavaka ny Blender. Ankoatr'izay, tiako ny manonona ireo asan'ny programa toa ny fanalana UV, ny maodely 3D, ny fandefasana endrika, ny fanahafana ny vokany, ny fanentanana, ny fanovana horonantsary ary ny fananganana.
LUTA MAIMAIMPOANA ho an'ny fanovana horonantsary After Effects
Ampidino ireo fanovana horonantsary maimaim-poana LUTs ho an'ny fandefasana loko haingana ny sary nataonao.
Sintomy After Effects maimaim-poana
Ampiasao After Effects for Mac / Win
Mba hitsapana maimaimpoana ity rindrambaiko ity dia sintomy ny kinova fitsapana nahazoana alalana ary andrana amin'ny horonan-tsarinao.
Tombontsoa After Effects